CCWarsame “Lama Yaabani UMAL Waayo isaga iyo Fahad Yaasiin waxay kasoo wada dagaaleen Gedo Boosaaso iyo Araare waa isku koox”. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Hoggaamiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee Wadajir C/raxmaan C/Shakuur Warsame ayaa si kulul uga hadlay hadal ka soo yeeray Sheekh Maxamed Cabdi Umal, kaasoo ka falceliyay dooda ka dhalatay fasiiradXadiis ka sugnaaday Nabigeena Muxamad (N.N.K.H)
Warsame oo arintaasi ka falceiyay ayaa yiri “Waxaan dhegaystay hadal uu Maxamad Cabdi Umal kaga falceliyey khudbad aan horay u jeediyey. Hadalka Umal wuxuu ku soo beegay caawa fiidkii, ka dib maanta duhurkii oo aan dadwaynaha Soomaaliyeed u caddeeyay ugana cudurdaartay wixii khalad ah ee hadalkaygii hore ku jiray. Waxaanse la yaabay in Umal uu si ula kac ah oo shakhsi ah ii lafa gaaray.Wuxuu igu tilmaamay: “Jaahil, eey oo kala ah, gaalo raac, Nebi diid ah, Diinta ka xuubsiibtay, dumarka cod si khiyaano ah uga raadsanaya.”
Isagoo sii hadlayay ayaa sidoo kale yiri “Umal wuxuu ka gaabsaday gabood falka iyo xadgudub ka madaxda haatan talada dalka haysa. Wuxuusan juuq ka oran dhiibistii Qalbidhagax, xasuuqii Baydhabo, cunaqabataynta shacabka Kismaayo, iyo weerarkii wiilasha ilaalada ii ahaa ee xarunta Xisbigayga lagu xasuuqay. U hiilinta Diinta ka mid maaha miyaa ilaalinta dhiiga Muslinka, dhowrista sharafkiisa iyo xuquuqdiisa?”
C/raxmaan C/Shakuur Warsame oo hadalkiisa sii wata ayaa dhinaca kale sheegay in Sheekh Umal ay isku Koox yihiin Taliyaha Sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo uu ku sheegay inuu yahay Milkiilaha dowladan.
“Lama yaabbani Sheekh Umal, sababta oo ah, waa ninkii na gaalaysiiyey markii aan heshiiskii Jabuuti galnay; waa ninkii gaalaysiiyey C/laahi Yuusuf; waa ninka Dawladdii Xasan Sheekh irdaha u taagnaa. Isaga iyo Xasan Daahir waxaa ay ilaalashadaan dawladda uu Farmaajo hoggaamiyo, sababtuna waa ay caddahay. Waa in Fahad Yaasiin oo ah madaxa xafiiska siyaasadda ee Xarakada Ictisaam oo ay soo wada galeen dagaalkii Araare, Gedo iyo Boosaaso uu dawladdaan milkiile ka yahay. Waxaa dhaqan u ah gaalaysiinta Muslimka, banaynta dhiigiisa iyo ku xadgudubka cirdigiisa”. Ayuu hadalkiisa ku sii daray Warsame.
Previous articleDAAWO:- Sh.Umal oo Daalim Dambi wayn galay ku tilmaamay Siyaasi CCWarsame “Warsamoow Alle ulaabo”.
Next articleQM oo soo saartay Digniin kale oo kusaabsan Duufaan aan caadi ahayn oo kusoo wajahan Somalia.